Korontana teo amin’ny Cosfa sy ny Jet Kintana: voasazy handoa 2 tapitrisa Ar ny Miaramila | NewsMada
Korontana teo amin’ny Cosfa sy ny Jet Kintana: voasazy handoa 2 tapitrisa Ar ny Miaramila
Nivoaka ny sazy teo amin’ny gidragidra nitranga nandritra ny fihaonan’ny Cosfa sy ny Jet Kintana, teo amin’ny fiadiana ny “Orange pro league”. Mandoa onitra ny Cosfa ary mpilalao enina avy amin’ny klioba roa tonta, tsy mahazo milalao.
Anisan’ny nodinihin’ny Club de football élite de Madagascar (CFEM), mpikarakara ny « Orange pro league », nivory ny talata 20 avrily lasa teo, ny savorovoro teo amin’ny fihaonan’ny Cosfa sy ny Jet Kintana, teny amin’ny kianja Vontovorona, ny alahady 18 avrily lasa teo. Taorian’ny fihainoana ny tatitra nataon’ireo “commissaire au match” sy ny tomponandraikitra rehetra, araka ny lalàna faharoa mifehy ny fifaninanana, misy ny sazy vola sy ny tsy fampilalaovana ireo mpilalao, ho an’ny andaniny sy ny ankilany.
Nosazina handoa onitra 2 tapitrisa Ar ny Cosfa noho ny faharatsian’ny fikarakarana sy ny fandraisana ny lalao, izay anjaran’izy ireo. Betsaka ireo zavatra tsy voahaja tamin’izany, toy ny tsy fampiasana ireo ankizy tokony haka baolina fa olona hafa mihitsy.
Ankoatra izay, mpilalao enina tsy mahazo manohy ny lalao eo amin’ny “Orange pro league” ka roa ny avy amin’ny Jet Kintana: Rajomazandry sy Razafindrasata Tsiry. Efatra ny an’ny Cosfa: Randriamamonjisoa Norbert, i Ndimbimahefa, kapitenin’ny ekipa, Razanadrabe Safidy ary Ramanantsoavina Nasoloniaina. Araka ny lalàna fahatelo mifehy ny “Orange pro league” hatrany, anjaran’ny federasiona malagasy (FMF) ny mamaritra ny faharetan-tsazin’ireo mpilalao tsirairay avy sy ny mampihatra izany. Efa nalefa any amin’ity rafitra misahana ny baolina kitra malagasy ity rahateo ny tatitra rehetra sy ny horonantsary mikasika ny fihaonana.
Mikasika ny ho tohin’ny fifaninanana kosa, hofaranana ireo ambin-dalao tsy tontosa ho an’ireo kaonferansy atsimo sy avaratra. Aorian’izay, hiditra amin’ny “Play-off” ny CFEM ka ny herinandro faharoa ny volana mey no hanatanterahana izany. Hiankina amin’ny fampivondronana ataon’ny Barea de Madagascar kosa ny fitohizany.